Yuusuf Garaad oo Fariin Cajiib ah u diray Xubnihii laga saaray Gudiga Doorashada | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Yuusuf Garaad oo Fariin Cajiib ah u diray Xubnihii laga saaray Gudiga Doorashada
London ( Kalshaale ) Yuusuf Garaad oo ah Ergayga Gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa ka hadlay xiisada ka taagan guddiga doorashada oo dhawaan qaar kamid ah dib loogu celiyay dhinacyadii soo magacaabay, halka kuwa kale lagu waayey eedeyntii ay u jeediyeen mucaaridka.
W/Q : Yuusuf Garaad Cumar
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=44771
5 Comments for “Yuusuf Garaad oo Fariin Cajiib ah u diray Xubnihii laga saaray Gudiga Doorashada”
June 9, 2021 - 8:06 pm
Somaliya in habaar ku dhacay dad aan dalkooda aqoon wanaagsan u lahayn baa soo maray waqtigii ka daneeyey dawladii Carta. Kooxdaa khabar maafishka ahayd xilal kala duwan bay ka soo qabteen dalka Somaliya iyo NGOs sida UNta iyo heyadaha kale ee caalamka sida BBCda iyo VOAda, waxay isugu jireen M/weynayaal iyo wasiiro IWM.
Yusuf Garaad wuxuu ka mid ahaa dadkii xilalkaa wax ka helay fuliyeyna dulmi badan sababay dagaaldii sokeeye iyo fidin wax ka metelid beenta Somali lagu kala dilyey ama qabyaalad ha noqoto ama taariikh beena danleey wadato fuliya, sida koonfur Talyaani baa haystay ha noqoto. Talyaani dalka 14 sanadood keliya buu haystay oo dagaal kaga socday dhan walba, culimadii baa u diiday inuu nasto, kuwii uu markii hore la soo heshiiyey wuxuu ku xidhay la jirkoodii ay ka raaceen Somalidii kale (saladanadii Hobyo iyo tii Bari).
Talyaanigii 1941dii buu dalka ka baxay oo Ingiriis kala wareegey. Isaguna wuxuu haystay 10 sanadood oo uu ku jooggay kacdoon shacab iyo dhagaxtuur aan kala go lahayn ilaa uu UNta u dhiibay. 1950kii UNta lagu wareejiyey koonfur, shacabkaana dalbaday, Somaliyana midna Ingiriis baa xoriyadeedii siiyey midna UNta ayuu ugu dhiibay, waxaba isagaa isku haystay, markii 1960kii la gaadhay wey midoobeen.
Yusuf isagoo aragtidaa Hargeysa ee qaldaneed ka duulaya wuxuu dulmi badan la samayn jirey maamuladii Hargeysa u kala danbeeyey, inuu kula safto dulmigooda si uu sii jooggo BBCda (waana maangaabnimo uu soo maray oo taariikhda ugu jirta). Dulmiga iyo beenta ay ku hayeen Somali iyo kufsadka taariikhda oo uu dhinaciisa kala afuufi jirey doodaha iyo kulamada si badheedha kula safan jirey, ilaa iyo haddeerna lagama hayo Somaliyeey isaamaxa.
June 9, 2021 - 9:19 pm
Soomaalidu waxay isku heystaan
ONLY DHULKA IYO HANTIDA HAWIYE
Nabad iyo xasilooni kama dhaceyso
Somalia ilaa Hawiyahu qabyaaladda u Barto
Sida Dirta iyo Daarood ka
Qax iyo Qaxooti kama baxeyso Somalidu
ilaa Hawiyahu u XISAABIYO xoolahooda
sida Isaaqu u XISAABIYO
( Daaroodku asagu maleh xoolo iyo Caasimado
la XISAABIYO oo asagaaba ah waxa abuurey
Shisheeyahu dhaafimaayo Faragalinta Somalia
ilaa Daaroodku yeesho Hanti AY KA ILAASHADAAN
( hadda waxaa ugu wacan Biyo qaadka shisheeye
ARMAAD LUF LUF ka heshaan wuxuu Gaalku
Ka boobo ONLY DHULKA AY WADA JOOGAAN
GAALKA CAD IYO GAALKA BADOW
Sidaas daraadeed ONLY halka shey
ee JIMCIYO SADEXDAAS CAQABADOOD
Waa in reer Qurac loo helo
” Caasimad iyo Hanti”
Or Hawiye oo lagu duro DNA XIN IYO QABYAALAD
June 9, 2021 - 9:57 pm
Waar saaxiib waxaan ku waydiiyey qolooyinka abtiyaashay miyaanay askariba kaka dhiman dagaalkii tigraay ileen hawiyihii uun baa leh inamaa naga maqane mise markii horeba idinkaa la idiin xulay
Bal arintaa soo baadh
June 9, 2021 - 11:10 pm
Dee ayagu $ 10,000 kun oo Canshuurtii
Eedo Batuulo ah ayey ku qaaten
TUULOOYINKII ALLEY BADEY
Abaar xun ayay reer Abtigaa soo mareen
Tobanka ayaa aamusiday
Somalia ha noolaato: marka aad leedahay somalia ha noolaato, ee isla markaasna aad reerkiina mooyaane reeraha soomaaliyeed ee kale iyo siyaasiyiintoodaba aad caayaso, sida aad Yusuf Garaad ba u caayaso ee beenta uga sheegayso.
Markaa sida magacaagu dhigayo waxaad u jeedaa -in Reerkiinu bes Noolaado!!
Somalia ha noolaato- MEANS Reer Qudhac bes ha noolaado!- Cajiib